ငယျခဈြဦးမို့ မမနေို့ငျ – My Blog
တက်ကစီ တဈစီး လမျးဘေး သဈပငျရိပျအောကျတှငျ ရပျထားသညျ ။ ကားပျေါတှငျတော့ တက်ကစီ ဒရိုငျဘာနှငျ့ နောကျခနျးတှငျ သပျသပျရပျရပျ ဝတျစားထားသော အမြိုးသား တဈဦး ။ နာရီ ကွညျ့လိုကျတော့ ခုနှဈနာရီခှဲသာသာရှိသေးသညျ ။ ကားဘကျမှနျထဲ ကို ခနခန လှမျးလှမျးကွညျ့နမေိသညျ ။ မကွာပါ …. အဖွူအစိမျးဝတျစုံလေးနဲ့ ခွငျးတောငျးလေးဆှဲလာသော ဆရာမ တဈယောကျ ဖွတျလြောကျလာသညျ ။ ဆရာမ က ကားတံခါးနားအရောကျ ခွအေစုံ ရပျတနျ့သှားကာ ဘေးဘီသို့ တဈခကျြ ဝဝေို့ကျကွညျ့ပီး ကားတံခါးလေး ဖှငျ့ကာ ဝငျလိုကျသညျ ။
“မောငျ ….စောငျ့နတော ကွာပီလား “ “မကွာသေးပါဘူး အခုလေးတငျပဲ ရောကျတာ ကြောငျးကို ခှငျ့တိုငျလာခဲ့တယျမလား “ “ဟုတျ တိုငျခဲ့တယျ တခွားလူတှေ တဈခုခု ထငျမှာစိုးလို့ ကြောငျးဝတျစုံနဲ့ပဲ ထှကျလာတာ “ “ကားဆရာ … — လိပျစာ ကိုမောငျးပေးပါ “ ကားလေး ဘီးစလိမျ့သှားသညျ ။ ကားဆရာကတော့ ကှကျကွညျ့ကှကျကွညျ့နှငျ့ မောငျးနှငျနလေသေညျ ။ ခွံဝငျးလေးနှငျ့ နှဈထပျတိုကျအိမျလေး ရှမှေ့ာ ကားရပျသှားသညျ ။ “ကြှနျနျော ဖုနျးဆကျလိုကျပါ့မယျ ဖုနျးဆကျတဲ့ အခြိနျ လာချေါပေးပါ“ လကျထဲမှာ တဈသောငျးတနျ သုံးရှတျ ထုတျပေးလိုကျသညျ ။ “အပွနျလာချေါခပါ ယူသှားလိုကျပါ ဆကျဆကျ လာချေါပေးပါ “ “စိတျခပြါဆရာ ဖုနျးသာဆကျလိုကျ “ အိမျလေးထဲသို့ နှဈယောကျသား ဝငျလာလိုကျသညျ ။ အိမျတခါးကို သခြောစှာ ပွနျပိတျလိုကျပီး နှဈယောကျသား တဈယောကျခါး တဈယောကျဖကျကာ တကျလာခဲ့ကွလသေညျ ။
အခနျးထဲ အရောကျ အခနျးတံခါးကို သခြောစှာ ပိတျလိုကျလသေညျ ။ အိမျကွီးက တိတျဆိတျနသေျောလညျး အခနျးတှရေဲ့ လုံခွုံလှသညျ ။ အခနျးထဲမှာ သီခငျြးသံ ကယျြကယျြ ဖှငျ့ထားလြှငျတောငျ အပွငျက ကွားနိုငျမညျမထငျ ။ အခနျး ထဲ စားပှဲပျေါသို့ ဆှဲခွငျးတောငျးလေး တငျလိုကျပီး တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ တငျးကွပျစှာ ဖကျထားကွလသေညျ ။ ထို နှဈဦးသညျက အခွားသူမြား မဟုတျပါလေ မီမီသိမျ့ အမြိုးသား မြိုးမငျးနှငျ့ ဝငျးနိုငျ မိနျးမ မိုးသန်တာတို့ပငျဖွဈလသေညျ ။ “လှမျးလိုကျတာ မောငျရယျ “ “မောငျလညျး အတူတူ ပါပဲ မိုးရယျ “ ခန်ဓာကိုယျ နှဈခု ခှာလိုကျကာ တဈယောကျခါးတဈယောကျဖကျထားရငျး ရီဝတေဲ့ မကျြဝနျးတှေ နဲ့ ကွညျ့မိကွသညျ ။ ကြောငျးဝတျစုံ ခါးတို အကြီအဖွူရောငျလေးနဲ့ ထမီ အစိမျးရောငျလေးအား ခပျကွပျကွပျစညျးနှောငျထားပီး ဆံထုံးလေး ထုံးထားသော မိုး ကို မြိုးမငျးကွညျ့မ၀ ဖွဈနလေသေညျ ။ မိုးသန်တာ မေးစလေ့ေးအား လှမျးဆှဲလိုကျကာ နုတျခမျးခငျြး ဂဟဆေကျလိုကျသညျ ။
ကြောငျးစိမျး ထမီပျေါမှ တငျပါးလေးတှေ ကို ပှတျသပျပေးလိုကျရငျး အနမျးမိုးတှေ ဆကျတိုကျ ရှာနမေိသညျ ။ တငျပါးအောကျခွနေားတှငျ အတှငျးခံမြော့ကွိုးရာလေးက အထငျးသား ဖွဈနသေညျ ။ နုတျခမျးခငျြး ပွနျခှာလိုကျပီး မြိုးမငျး ရဲ့ ရငျခှငျထဲမှာ မှီလိုကျသညျ ။ မြိုးမငျး က မိုးသန်တာရဲ့ တငျပါးလေးတှေ ဆကျပှတျပေးနလေိုကျသညျ ။ လှနျခဲ့သညျ့ သုံးနှဈကြျောလောကျက ရခဲ့ဖူးသော ကိုယျသငျးရနံ့လေးတှေ ကို ပွနျလညျ ရှူရှိုကျမိကွသညျ ။ တငျးရငျးလှနျးတဲ့ ရငျသားတှကေ မြိုးမငျး ရငျဘတျ နှငျ့ ဖိကပျထားမိလသေညျ ။
ဖငျနှဈခွမျးကွားထဲကို လကျနဲ့ ဆှဲပှတျလိုကျတယျ ဆိုရငျပဲ မိုးသန်တာရဲ့ အသကျရှူသံတှေ မွနျဆနျလာရသညျ “အား….ရှီးးးး မောငျ “ “မိုးးးး “ “ရှငျ….“ “အရငျတုနျးက လို ရငျခုနျသံတှေ မွနျနပေီကှာ“ “အတူတူပါပဲ မောငျရယျ “ “မိုးက အရငျတုနျးကလို စကပျတိုမလေး မဟုတျတော့ပဲ ကြောငျးဆရာမ ဝတျစုံလေးနဲ့ ဆိုတော့ ပိုပီး ရငျခုနျနမေိတယျ “ “စကပျတိုမလေး တုနျးကလိုပဲ အခဈြတှေ မြားမြား ပေးပါမောငျ “ “ဆရာမလေး ကို စကပျတိုမလေး ထကျ အခဈြတှေ ပိုပေးခငျြတာပါ “ “အငျးးးး အား….မောငျ ရယျ“ “မောငျ့လီးကို ကိုငျကွညျ့ပါဦး မိုး “ “အငျးးးး အကွီးကွီးပဲနျော အောကျခံဘောငျးဘီကွီး ပေါကျထှကျသှားဦးမယျ “ မြိုးမငျး ပုဆိုးကို ဆှဲခြှတျပေးလိုကျပီး အောကျခံ ဘောငျးဘီ ပျေါမှာ ပှတျသပျပေးလိုကျသညျ ။
“အရငျလို နမျးမပေးခငျြဘူးလား “ “အငျးးးး မောငျ့ စိတျတိုငျးကြ ဖွဈစရေမယျနျော “ မိုးသန်တာ ဒူးထောကျထိုငျခလြိုကျသညျ ။ မြိုးမငျး လီးနဲ့ သူ့မကျြနှာက တဈတနျးတညျး အနေ အထား ဖွဈသှားသညျ ။ ဘောငျးဘီမြော့ကွိုးလေး ကို အသာအယာ ကိုငျပီး ဆှဲခြှတျလိုကျတော့ အောကျက လီးက ငေါကျကနဲ ထှကျလာသညျ ။ မြိုးမငျးလညျး အပျေါ အကြီကို ဆှဲခြှတျပဈလိုကျသညျ ။ မြိုးမငျး အဝတျအစားမဲ့ ကိုယျလုံးတီး ဖွဈသှားသညျ ။ သူ့ရှမှေ့ာတော့ ကြောငျးဆရာမ ဝတျစုံလေးနဲ့ မိုးက ဒူးထောကျကာ မြိုးမငျးလီး ကို အသာကိုငျပှတျပေးနသေညျ ။
“မောငျ့လီးက အရငျထကျ ပိုကွီးလာသလိုပဲနျော “ “အငျးးး စုပျပေးတော့ “ “အငျး “ လီးတံထိပျဖြားလေး ကို လြာနဲက အသာ တို့ထိလိုကျကာ နုတျခမျးလေး ဟပီး ငုံပဈလိုကျသညျ “အားးး` “ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ “ လီးစုပျနရေငျး မိုးသန်တာ အရငျတုနျးက အခြိနျ တှကေို ပါ သတိရလိုကျမိသညျ ။ တက်ကသိုလျ တကျတဲ့ အခြိနျမှာ မောငျနဲ့ ရညျးစားတှေ ဖွဈပီး ခဈြရညျလူးခဲ့ကွတာ အကွိမျကွိမျ ။ ထို့နောကျ မောငျက နိုငျငံခွားထှကျသှားသညျ ။ သူလညျး ဝငျးနိုငျနဲ့ မိဘတှေ ပေးစားလို့ သဘောတူလကျထပျဖွဈခဲ့ပီး ကြောငျးဆရာမ တဈယောကျအဖွဈ ဘ၀ ကို ရပျတညျလာခဲ့ကာ မြိုးမငျးနဲ့ အဆကျအသှယျ ပွတျခဲ့လသေညျ ။ အခု ပီးခဲ့တဲ့ သုံးပတျကြျောလောကျက မြိုးမငျးနဲ့ အမှတျမထငျ ပွနျဆုံကွတော့ နှဈယောကျလုံး အိမျထောငျကနြသေညျ့ အဖွဈ ဖွဈနသေညျ ။
သို့ပမေယျ့လညျး ငယျစဉျက အခဈြတှေ က တဖနျပွနျမှေးဖှားလာသညျမို့ ဒီနေ့ အခြိနျ က သူတို့ နှဈဦးအတှကျ ပထမဆုံး ပွနျလညျအခဈြနယျကြှံကွခွငျးဖွဈလသေညျ ။ မြိုးမငျးက တောငျးဆိုလာခဲ့သညျမို့ တျောတျောကွာစဉျးစားခဲ့မိသေးသညျ ။ သို့သျောလညျး အရငျက အခဈြတှကေ လှနျဆနျမရတဲ့ အဖွဈမြိုး ခံစားမှုတှေ ပွနျလိုခငျြခဲ့မိသဖွငျ့ လိုကျလြောရနျ ဆုံးဖွတျလိုကျသညျ ။ ကြောငျးကို ခှငျ့တိုငျ ၊ ဝငျးနိုငျကိုတော့ ကြောငျးသှားမညျဟု လိမျညာခဲ့ကာ စောစော ထှကျလာဖွဈခဲ့လသေညျ ။ “ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ “ “အှတျ အှတျ ပွှတျ ပွှတျ “ “အားးး ကောငျးလိုကျတာ မိုးရယျ အရငျတုနျးကအတိုငျးပဲ မိုးက စုပျတာ တျောလိုကျတာ “ နုတျခမျး နှဈဘကျကို ဖိကပျထားရငျး အတှငျးလြာကို ရဈပတျကစား က အားရပါးရ စုပျနမေိသညျ ။
“ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ “ “အား…. မိုး..ကောငျးလိုကျတာ အား….း “ လကျတဈဘကျကလညျး ဥတှကေို ခပျဖှဖှလေး ပှတျပေးနသေေးသညျ ။ “အားး..အား….“ “ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ “ လီးကို ပါးစပျထဲမှ ပွနျထုတျလိုကျကာ “ကောငျးလားမောငျ “ “အငျးးး အရငျတုနျးကထကျ ပိုကောငျးလာတယျ ယောင်ျကြားရပီး ပိုကြှမျးလာတယျထငျတယျ “ “ဟှနျးးးးမောငျနျော “ လီးကို ပွနျငုံကာ စုပျလိုကျသညျ “ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ “ “အား….း မိုးရယျ ကောငျးလိုကျတာ “ ကြောငျးဆရာမ ဝတျစုံလေးဖွငျ့ လီးစုပျပေးနသေော မိုးသန်တာကို ငုံကွညျ့ရငျး စိတျတှေ ပိုထလာရပွနျသညျ
“အား…. ကောငျးလိုကျတာ “ “ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ “ “အားးး..အား….မိုးးးးးး“ “ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ “ “အားးး မိုး မောငျ လိုးခငျြပီကှာ စုပျတာ ရပျလိုကျဦး “ လီးတံ ကို ခြှတျလိုကျပီး မတျတပျရပျလိုကျကာ အပျေါမှ ရငျဖုံးအကြီအဖွူကွယျသီးလေး ကို ဖွုတျမညျအလုပျ “မခြှတျနဲ့မိုး မိုးကို ကြောငျးစိမျးလေး နဲ့ လိုးခငျြသေးတယျ ပီးမှ မိုးအဖုတျကို အားရအောငျ ပွနျယကျပေးမယျ အခု လိုးခငျြနပေီ ကုတငျမှာ လကျထောကျပီး ကုနျးလိုကျ “ “အငျးးးး ပါ မောငျ့သဘောနျော “ ကုတငျစောငျးမှာ လကျလေးထောကျပီး ကုနျးလိုကျတယျ ။ ကြောငျးစိမျး ထမီ အောကျမှ ဖငျအိုးကွီးတှေ က ကားပီး အယျထှကျနသေညျ ။
မြိုးမငျးလညျး မိုးသန်တာနောကျမှာ မတျတပျရပျနရောယူလိုကျပီး တငျပါးတှကေို ပှတျသပျလိုကျသညျ ထို့နောကျ ထမီလေးကို အသာလှနျတငျလိုကျသညျ ။ အောကျခံပငျတီ အသားရောငျလေးမှာ တငျပါးတှကေို တငျးကွပျနအေောငျ ထိနျးထားသညျ။ “အား…. မိုးတငျပါးကွီးတှကေ အရငျထကျ ပို ထှားလာတယျကှာ “ “အ … မောငျ အား….း“ မောငျက သူမ တငျပါးကို အားမလို အားမရ အမွဲရိုကျတတျသညျကို ပွနျသတိရမိကာ အဖုတျထဲမှ အရညျကွညျမြား စိမျ့ကနဲ စိမျ့ကနဲ ကလြာသညျ “ “အား….ရှီးးးးမောငျ လိုးတော့ကှာ ခံခငျြပီ“ မိုးသန်တာ အတှငျးခံပငျတီလေးကို ဒူးနားလောကျထိ ဆှဲခလြိုကျသညျ ။လီးကို အဖုတျဝ မှာ အသာတလေို့ကျပီး ဖွေးဖွေးခငျြးထိုသှငျးပေးလိုကျသညျ
“အား…. ဝငျလာပီမောငျ အား….အမလေး“ “အား….ရှီးးးး အငျ့ အငျ့ အငျ့ “ “ဖတျ ဖတျ ဖတျ ဖတျ ဖတျ “ “အားးး မောငျ အား…. ကောငျးလိုကျတာ အမလေးးးးလေးးးးး “ “ဘှတျ ဘှတျ ဖတျ ဖတျ ဖတျ ဖတျ “ လညျပငျးအထကျနားရှိ ဆံထုံးလေး ကို လှမျးဆှဲလိုကျကာ လကျတဈဘကျက ခါးစပျနားလေး ကို ကိုငျထားရငျ ဆောငျ့ပေးလိုကျသညျ “အငျ့ အငျ့ ဖတျ ဖတျ ဖတျ ဖတျ “ “အားးး ကောငျးတယျမောငျ လိုးးးး လိုးးးး အားးးရှီးးးးဟငျ့ ဟငျးးးး“ “အငျ့ အငျ့ အငျ့ ဒုတျ ဒုတျဒုတျ အငျ့ “ “အားးး မောငျ့ အလိုးမခံရတာ ကွာပီကှာ အား…. “ ကြောငျးစိမျးဝတျစုံလေးဖွငျ့ ဖငျကုနျးခံပေးနသေော မိုးသန်တာကို လိုးနရေသညျမှာ စိတျထဲ ပိုပီး ဖီလငျ လာလှပသေညျ “အငျ့ အငျ့ အငျ့ “ “ဖတျ ဖတျ ဖတျ ဖတျ ဖတျ ဖတျ “ “ဘှတျ ဘှတျ ဘှတျ ဘှတျ ဘှတျ ဘှတျ “
“အားးး မိုးဖငျကွီးက ပိုကွီးလာလို့ အရငျထကျ ပို အားရတယျကှာ အငျ့အငျ့အငျ့“ “အားးး မောငျ အားးး ကောငျးတယျ လိုး အားးး ဆောငျ့ပေး အား….“ “ဘှတျ ဘှတျ ဘှတျ ဘှတျ “ “အငျ့ အငျ့ အငျ့ “ “အ အ အားးး “ “အငျ့ အငျ့ အငျ့ ခံလို့ကောငျးလား မိုးးးး “ “အငျး ကောငျးတယျမောငျ အားးး အ ဆောငျ့ ပေး မိုး ခံနိုငျတယျ ဆောငျ့ဆောငျ့ “ “အငျ့ကှာ အငျ့ကှာ ရော့ အငျ့အငျ့ ဖတျဖတျ ဖုတျ ဖတျ ဘှတျ “ “ဇှပျ ဇှပျ ဇှပျ ဇှပျ ဘှတျ ဘှတျ “ ကုတငျစောငျး ဖငျကုနျးထားသညျ့ အနအေထားမို့ လိုးရသညျမှာ အားရှိလှသညျ ။
ငယျခဈြတှေ အခုမှ တဖနျပွနျတှေ့ ပွနျလိုးရသညျမို့ စိတျတှေ တအားထနျနလေသေညျ “အငျ့ကှာ အငျ့ အငျ့ အငျ့ မိုးဖငျကို ကွိုကျတယျကှာ အငျ့ အငျ့ အငျ့ “ “ဘှတျ ဘှတျ ဘှတျ “ လီးတံမှာ အဖုတျထဲသို့ အဆုံးထိ ဝငျသှားလိုကျ ပွနျထှကျလာလိုကျ စညျးခကျြ ကနြပေသေညျ “မိုး … ထလိုကျ နံရံမှာ လကျထောကျ ဖငျကော့ပေးးး“ “အငျးးးးး“ မိုးသန်တာ မတျတပျရပျလိုကျပီး ထမီကို ပါ ခြှတျခလြိုကျကာ အောကျခံပငျတီလေးကိုလညျး အောကျထိ ခြှတျခလြိုကျသညျ “မောငျ အကုနျခြှတျလိုကျတော့မယျနျော အကြီတှေ ကွကေုနျလိမျ့မယျ “
“အငျးးး မိုသဘော “ အကြီရော ဘျောလီပါ ခြှတျပဈလိုကျသညျ “ဟားး.. မိုး နို့တှကေလညျး အယျနတောပဲကှာ “ ဖငျနှဈခွမျးကွား လီးကို အမွှောငျးလိုကျ ကပျပေးလိုကျရငျး နောကျကနေ သိုငျးဖကျကာ နို့အုံကွီးတှကေို အားရပါးရ နယျပဈလိုကျသညျ ။။ “အားးး ရှီးးးမောငျ အား….“ နှဈယောကျသား မတျတပျရပျ အနအေထား ဖွငျ့ မိုးသန်တာကလညျး ဖငျကွီးကို နောကျကို ပဈကာ ကော့ကော့ပေးနမေိသညျ ။ ထို့နောကျ အခနျးနံရံ ဆီသှားကာ နံရံမှာ လကျထောကျလိုကျရငျး ဖငျကော့ပေးလိုကျသညျ။ “မိုး ပေါငျ နဲနဲ ကားလိုကျ “ အငျးးး.. မြိုးမငျးက မိုးသန်တာ နောကျမှ ထိုငျခလြိုကျကာ ဖငျနှဈခွမျးကို ဖွဲကွညျ့လိုကျသညျ ။
“အားးး မိုး စောကျဖုတျကွီးက အရမျးလှတာပဲကှာ ပွှတျ ပွှတျပွှတျ “ ပွောလဲပွော လြာဖွငျ့ လှမျးထိုးယကျပဈလိုကျသညျ “အား….ကောငျးလိုကျတာမောငျရယျ မောငျယကျပေးတာ မခံရတာ ဘယျလောကျတောငျကွာသှားပီလဲ အားးး“ “ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ “ ဖငျနှဈခွမျးကွား အနောကျမှ ဖွဲပီး ယကျနသေညျမို့ မြိုးမငျး နှာခေါငျးက မိုးသန်တာ ဖငျကွားထဲ နဈမွုပျနသေညျ “ပွှတျ ပွှတျ ပလကျ ပလကျ ပွှတျ “ “အားးး “ မြိုးမငျး လြာကို အဖုတျမှ ဖငျဝထိ အလြားလိုကျ ဆှဲသပျပေးလိုကျသညျ “ပလကျ ပလကျ ပွတျ ပွတျ ပွတျ “
“အား…. မောငျရယျ အား….“ မိုးသန်တာက အသား သိပျမဖွူသညျမိုး အဖုတျက လညျး နဲနဲ တော့ အညိုဘကျသနျးသညျ ။ ဖငျဝ ကလညျး ညိုတိုတို လေး ။ စအို ခရသေားတလြောကျကို လြာနဲ့ ရဈသိုငျး ပတျကာ ယကျပေးလိုကျတော့ ဖငျကွီး ကော့ကော့တတျသှားသညျ “အား…. မောငျ …..အမလေးးးး အား….“ “ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ “ “အားးး ရှီးးးးးးကောငျးတယျ မောငျ အား…. “ ““ “အ မောငျ အား….းး“ သူ့ယောင်ျကြားက အခုလို ဖငျကို မရိုကျပေးခဲ့ဖူးဘူး ။ မြိုးမငျး တဈယောကျသာ လိုးရငျ ဖငျရိုကျတတျလသေညျ ။
မိုးသန်တာဖငျကွီးမှာ မြိုးမငျး လကျဝါး ရိုကျခကျြကွောငျ့ တုနျခါသှားသညျ ။ “ဖွောငျးးးးးးဖွနျးးးးးးးးးဖတျ ဖတျ “ “အား…. အ အီးးး.. အား….“ မြိုးမငျး လကျခလယျကို ပါးစပျထဲ ထိုးထညျ့ကာ တံတှေး စှပျလိုကျပီး မိုးသန်တာ ဖငျပေါကျထဲ အဆုံးထိ ထိုးထညျ့ပဈလိုကျသညျ “အား… “ “အမလေးးးး အား…. မောငျရေ အား….“ လကျခလယျကို ဖငျခေါငျးထဲမှာ ကှေးလိုကျဆနျ့လိုကျ လုပျရငျး မှထေိုးပေးကာ အထုတျအသှငျး လုပျပေးလိုကျသညျ “အားးး….“ မိုးသန်တာ ဒူးတှေ ပါ တဆကျဆကျ တုနျလာလသေညျ “အီးးးအား….းးးး“ ဖငျနှဈခွမျးကွားကို တံတှေး ပဈခနဲ ထှေးလိုကျတော့ တံတှေးတှကေ ဖငျနှဈခွမျးကွားမှ ဖငျပေါကျဝထိ စီးကလြာက ပိုမိုစိုစှတျလာပီး လကျခလယျ အသှငျးအထုတျမွနျဆနျလာသညျ။
“အ အ အ အား….းး“ “အငျ့ အငျ့ အငျ့ အငျ့ အငျ့ အငျ့ “ “အားးး မောငျ လိုးတော့ အားးးရှီးးးး “ “အငျးးး မိုး ဒီတခါ ဖငျ ခြ မယျနျော မိုးဖငျကို မခရြတာ ကွာလှပီ “ “အငျးးးး မောငျ့သဘော မိုး တကိုယျလုံး မောငျ့သဘောပဲ ကွိုကျတာလုပျ အား….“ မိုးသန်တာ နောကျတညျ့တညျ့ တှငျနရောယူလိုကျပီး ဒူးကို အသာကှေးလိုကျကာ ဖငျပေါကျဝ တှငျ လီးဒဈကို တလေို့ကျသညျ ။ ဒဈခေါငျး ကို မွုပျရုံ လကျဖွငျ့ ထိနျးကာ အသာ ထိုးထညျ့လိုကျသညျ ။
စိုစှတျနသေညျမို့ ဒဈခြောငျးက ပလှတျခနဲ့ တိုးဝငျသှားသညျ “အ …. “ “ဖွေးဖွေးခငျြး အကုနျထညျ့မယျနျော “ “အငျးးးး အား…. ဖွေးဖွေး မောငျ “ “အငျးးး….အငျ့ “ စီးတှဲတှဲ တဈရဈခငျြး ထိုးဝငျသှားတဲ့ အရသာ ကို နှဈယောကျလုံး ခံစားနမေိသညျ “အားးး ရရဲ့လား မိုး တအားကွပျတယျနျော “ “အငျး ရတယျမောငျ ထိုးထညျ့ အား….း“ “အငျးးး တျောတျော ဝငျနပေီ အဆုံးထိ ရောကျတော့မယျ “ “အငွးးးးအ အ အ “ လကျနှဈဖကျနဲ့ တငျပါး နှဈခွမျး ကို အစှမျးကုနျဖွဲကွညျ့ကာ ထိုးသှငျးလိုကျသညျ “အား….အဆုံးထိ ရောကျသှားပီ “ “အားးး မောငျရယျ နာလညျးနာတယျ ကွပျတယျ “
“အငျးးး အထုတျအသှငျးလုပျမယျနျော “ “အငျးး ဖွေးဖွေး မောငျ အားးး မောငျလိုးပီးကတညျးက အခုထိ ဖငျမခံဖွဈဘူး “ “အငျးးး ဟုတျလား ယောင်ျကြားက ဖငျ မခြ ဘူးလားးး“ “ဟငျအငျးးး မခဘြူး “ “အငျးးး မိုးကို မောငျနဲ့ မိုးယောင်ျကြား အပွငျ အခွားသူ နဲ့ လိုးကွသေးလား “ “အာ မောငျကလညျး မိုးက မောငျနဲ့ပဲနဖွေဈခဲ့တာလေ အခွားလူ နဲ့ မနပေါဘူး ယောင်ျကြားရပီးး ယောင်ျကြားနဲ့ပဲခံတာပေါ့လို့ ဟှနျးးးး“ အဝငျအထှကျ နဲနဲ ကွပျနသေေးသညျမို့ ဖွေးဖွေးခငျြး အထုတျအသှငျးလုပျပေးရငျး နို့တှကေို ညှဈပေးနမေိသညျ ။
“အငျးးးး အာ့ကွောငျ့ မိုး ဖငျက ကွပျနတောကိုးးး အား….“ “အငျးးးး အားးး ဖွေးဖွေးမောငျ ကှဲ သှားမှာ စိုးတယျ အားးးရှီးးးးး“အား….“ “အားးး မောငျ ပွနျထုတျပီး အဖုတျထဲ ပွနျသှငျးပီး ခြောအောငျလုပျလိုကျဦး ကွပျနတေယျ အား….“ မြိုးမငျးလညျး လီးတံကို ဖငျပေါကျထဲက ပွနျခြှတျကာ စောကျဖုတျထဲ လေးငါးခကျြဆောငျ့ပေးလိုကျတယျ လီးတံမှာ စောကျရညျမြား နဲ့ ခြှဲကြိကြိ ဖွဈလာတော့မှာ ဖငျဝမှာ တပေီ့း ပွနျထိုးထညျ့လိုကျတော့ စောစောက ထကျစာလြှငျ ပို ခြောမှတျလာတယျ “အား…. မောငျ ကောငျးလာပီ အငျးးးးးအား….“ “အား…. မိုး ဖငျကို လိုးလို့ ကောငျးလိုကျတာ အား….းး ဖွေးဖွေး ဆောငျ့တော့မယျနျော “ “အငျးးး မောငျ အား….းး လိုးးးအမလေး“ ဖငျ ခေါငျးထဲမှာ လီးတံ က တျောတျောလေး ခြောခြောမှမှေ့ေ့ ဖွဈလာသညျ
“အငျ့ အငျ့ အငျ့ အငျ့ “ “ဖတျ ဖတျ ဖတျ ဖတျ ဖတျ “ “အား….း အား….း“ “ဘု ဘုဘု …ဘှတျ ဘှတျ ဘှတျ ဖတျ ဖတျ ဖတျ “ “အား…. အမလေး မောငျ အားးး ကောငျးလာပီ ဆောငျ့ အား….း“ “အငျ့ အငျ့ အငျ့ ရော့ အားးး ကောငျးလားမိုး ကွိုကျရဲ့လားးး“ “အငျးးး အရမျးကွိုကျတယျကှာ အား…. “ မိုးသန်တာ ရဲ့ ပုခုံးနှဈဘကျကို ဆှဲကိုငျပီး နောကျကနေ ဆောငျ့ဆောငျ့ လိုးနသေညျ “အား….းးကောငျးလိုကျတဲ့ ဖငျကှာ အား….း“ “အား…. မောငျ … မိုး ဒူးတှေ မခိုငျခငျြတော့ဘူးအား….း ကုတငျပျေါသှားရအောငျကှာ မရပျနိုငျတော့ဘူး“ ဟုတျပါသညျ မိုးသန်တာ ဒူးတှေ တဆကျဆကျ တုနျလာပီး ရပျနိုငျစှမျး သိပျမရှိတော့ ဒူးတှေ ညှတျခငျြလာသညျ
ကုတငျပျေါသို့ ဆှဲချေါလာပီး မြိုးမငျး ပကျလကျလှနျလိုကျတော့ မြိုးမငျးဘေးမှာ ဒူးလေး တုတျကာ ထိုငျလိုကျပီး လီးတံကွီးကို ကိုငျကာ ဂှငျးထုပေးလိုကျသညျ “မောငျ့လီးကွီး က အရငျထကျ တျောတျော ကွီးလာတယျနျော တုတျလညျး တုတျလာတယျ “ “မိုးရဲ့ အလှတှကေို မွငျလိုကျရတော့ လီးက ပိုတောငျလာပီး ပိုထှားလာတာလေ “ သူမ ဖငျပေါကျထဲမှ ထှကျလာပီး အရညျတှေ စိုရှဲနသေော လီးတံ ကွီးကိုကွညျ့ကာ စိတျတှေ ပိုထလာရငျး လီးတံကွီးကို ငုံစုပျလိုကျသညျ “ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ “ “အားးး ကောငျးလိုကျတာ မိုးးးးးရယျ “ “ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ “ “အားးး“ “မိုးးး တကျဆောငျ့ပေးကှာ “ “အငျးးးး“ ပါးစပျထဲမှ လီးကို ခြှတျလိုကျကာ မြိုးမငျးပျေါ ကြောပေးပီး ခှလိုကျသညျ ။
မိုးသန်တာ သူ့လကျကို သူ တံတှေး စှတျလိုကျပီး ဖငျဝမှာ သုတျလိမျးကာ လီး တံကို ကိုငျပီး တကေ့ာ ထိုငျခလြိုကျသညျ “ဘှတျ …..“ “အား…အား….း“ “အငျ့အငျ့အငျ့အငျ့ “ “ဘှတျ ဘှတျ ဘှတျ ဖတျ ဖတျ ဖတျ “ ကြောပေးကာ ထိုငျဆောငျ့ပေးနသေညျမို့ မိုးသန်တာရဲ့ ဖငျအိုးကွီးရော လီး အဝငျအထှကျကော သခြောစှာ မွငျနရေလသေညျ ။ “အား….အီးးးး အား….“ “ဖှတျ ဖှတျ ဖှတျ ဖတျ ဖတျ ဖတျ “ “အငျ့ အငျ့ အငျ့ “ “ဖွနျး ဖွနျး“ “အား….းးးး ဆောငျ့ကှာ အား….း“ “အငျ့ အငျ့ အငျ့ အငျ့ “ “အားးး တောငျ့လိုကျတဲ့အိုးကှာ …. မိုး နဲ့သာ လကျထပျဖွဈရငျ မိုးကို ဖငျရော အဖုတျရော နတေို့ငျးလိုနမေိမှာပဲ အားးး“ “အငျးးးးး အငျ့ အငျ့ အား…. ကောငျးတယျမောငျရယျ အား….“ “အငျးးးး ဆောငျ့ကှာ အား….“ “စောကျဖုတျထဲ ပွောငျးဦးမယျမောငျ အားးး မိုး ပီးခငျြလာတယျ အား….း“ လီးတံကို လကျနဲ့ လှမျးဆှဲထုတျလိုကျရငျး အဖုတျထဲ သို့ ပွောငျးထညျ့လိုကျကာ စကောဝိုကျပုံစံ ဖွငျ့ လှညျ့ကာ ညှောငျ့နမေိသညျ ။
အငျ့ အငျ့အငျ့… “ဖတျ ဖတျ ဖတျ ဖတျ ဖတျ “ `အား…“ “အား….မောငျရေ အား….း အမလေးးးးး“ “အားးး ဆောငျ့ မိုးးး မောငျလညျးပီးတော့မယျ အား….းး“ “အငျ့ ကှာ အငျ့ အငျ့အငျ့ “ မြိုးမငျး ကိုယျကို မတျလိုကျကာ မိုးသန်တာကို တှနျးလိုကျပီး လေးဘကျကုနျး အနေ အထား ဖွဈအောငျလုပျလိုကျသညျ ။ လီးတံကတော့ ကြှတျမသှား “အငျ့ အငျ့ အငျ့ အငျ့ “ နောကျကနေ ခါးကို ကိုငျပီး အားကုနျဆောငျ့လိုးတော့သညျ “အငျ့အငျ့ ဖတျ ဖတျ ဖှတျ ဖှတျ “ “အား….းမောငျ အားးး ထိတယျ အားးး အမလေး“ “အငျ့ အငျ့ အငျ့ ရော့ကှာ အငျ့ “ “ဖှတျ ဖှတျ ဖှတျ ဖှတျ ဖှတျ “ “ဇှပျ ဇှပျ ဇှပျ ဇှပျ ဇှပျ “ “အား…. ထှကျတော့မယျ မိုး..အား…. အငျ့အငျ့ အီးးးးး“ ဆောငျ့ခကျြတှကေ ပိုပို မွနျလာပီးနောကျ မြိုးမငျး ဆကျမထိနျးနိုငျတော့ပဲ မိုးသန်တာ ဆောကျဖုတျထဲသို လရတှေေ တဖြောဖြော ပနျးထုတျပဈလိုကျတော့သညျ “အ အ အ အ အ အား…ထှကျကုနျပီ မိုးးးအား….“ “အားးး မိုးလညျး ပီးပီ အား…. ကောငျးတယျ အား….“ နှဈယောကျသား ဘေးသို့ ခှခှေလေေး လဲကသြှားတော့သညျ ။
အဖုတျထဲမှ လီးတံကလညျး ကြှတျထှကျသှားကာ အဖုတျထဲမှ လရတှေေ စီးကလြာလသေညျ..ဘယျလောကျကွာကွာ အိပျပြျောသှားသညျမသိ မိုးသန်တာ ရခြေိုးခနျးမှ ပွနျထှကျလာတော့မှ မြိုးမငျးလညျး နိုးလာသညျ ။ “မိုးးး ရခြေိုးလိုကျတာလား “ “ဟုတျတယျ ညဈပတျနလေို့ “ တဘကျအဖွူရောငျကွီး ပတျထား သညျ့ မိုးမှာ တမြိုးလှနသေညျ ။ ရစှေတျထားသညျ့ တဘကျ အသေးတဈထညျ ဖွငျ့ မြိုးမငျး လီးတံကို ယုယုယယ သုတျပေးနသေညျ ။ ဟိုး အရငျတုနျးကတညျးက လိငျဆကျဆံပီးတိုငျး မိုးသန်တာက မြိုးမငျး လီး ကို သခြော သနျ့ရှငျးပေးနကေမြို့ မြိုးမငျး အရငျကအခြိနျလေးတှေ ကို တှေးမိရငျး ပွုံးမိလိုကျသညျ “မိုးက အရငျတုနျးကလိုပဲနျော မောငျ့ကို သနျ့ရှငျးပေးတတျတာလေး သဘောကတြယျ “ ပါးလေးကို သာသာဖှဖှ နမျးလိုကျသညျ။ပွီး
တက္ကစီ တစ်စီး လမ်းဘေး သစ်ပင်ရိပ်အောက်တွင် ရပ်ထားသည် ။ ကားပေါ်တွင်တော့ တက္ကစီ ဒရိုင်ဘာနှင့် နောက်ခန်းတွင် သပ်သပ်ရပ်ရပ် ဝတ်စားထားသော အမျိုးသား တစ်ဦး ။ နာရီ ကြည့်လိုက်တော့ ခုနှစ်နာရီခွဲသာသာရှိသေးသည် ။ ကားဘက်မှန်ထဲ ကို ခနခန လှမ်းလှမ်းကြည့်နေမိသည် ။ မကြာပါ …. အဖြူအစိမ်းဝတ်စုံလေးနဲ့ ခြင်းတောင်းလေးဆွဲလာသော ဆရာမ တစ်ယောက် ဖြတ်လျောက်လာသည် ။ ဆရာမ က ကားတံခါးနားအရောက် ခြေအစုံ ရပ်တန့်သွားကာ ဘေးဘီသို့ တစ်ချက် ဝေ့ဝိုက်ကြည့်ပီး ကားတံခါးလေး ဖွင့်ကာ ဝင်လိုက်သည် ။
“မောင် ….စောင့်နေတာ ကြာပီလား “ “မကြာသေးပါဘူး အခုလေးတင်ပဲ ရောက်တာ ကျောင်းကို ခွင့်တိုင်လာခဲ့တယ်မလား “ “ဟုတ် တိုင်ခဲ့တယ် တခြားလူတွေ တစ်ခုခု ထင်မှာစိုးလို့ ကျောင်းဝတ်စုံနဲ့ပဲ ထွက်လာတာ “ “ကားဆရာ … — လိပ်စာ ကိုမောင်းပေးပါ “ ကားလေး ဘီးစလိမ့်သွားသည် ။ ကားဆရာကတော့ ကွက်ကြည့်ကွက်ကြည့်နှင့် မောင်းနှင်နေလေသည် ။ ခြံဝင်းလေးနှင့် နှစ်ထပ်တိုက်အိမ်လေး ရှေ့မှာ ကားရပ်သွားသည် ။ “ကျွန်နော် ဖုန်းဆက်လိုက်ပါ့မယ် ဖုန်းဆက်တဲ့ အချိန် လာခေါ်ပေးပါ“ လက်ထဲမှာ တစ်သောင်းတန် သုံးရွတ် ထုတ်ပေးလိုက်သည် ။ “အပြန်လာခေါ်ခပါ ယူသွားလိုက်ပါ ဆက်ဆက် လာခေါ်ပေးပါ “ “စိတ်ချပါဆရာ ဖုန်းသာဆက်လိုက် “ အိမ်လေးထဲသို့ နှစ်ယောက်သား ဝင်လာလိုက်သည် ။ အိမ်တခါးကို သေချာစွာ ပြန်ပိတ်လိုက်ပီး နှစ်ယောက်သား တစ်ယောက်ခါး တစ်ယောက်ဖက်ကာ တက်လာခဲ့ကြလေသည် ။
အခန်းထဲ အရောက် အခန်းတံခါးကို သေချာစွာ ပိတ်လိုက်လေသည် ။ အိမ်ကြီးက တိတ်ဆိတ်နေသော်လည်း အခန်းတွေရဲ့ လုံခြုံလှသည် ။ အခန်းထဲမှာ သီချင်းသံ ကျယ်ကျယ် ဖွင့်ထားလျှင်တောင် အပြင်က ကြားနိုင်မည်မထင် ။ အခန်း ထဲ စားပွဲပေါ်သို့ ဆွဲခြင်းတောင်းလေး တင်လိုက်ပီး တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် တင်းကြပ်စွာ ဖက်ထားကြလေသည် ။ ထို နှစ်ဦးသည်က အခြားသူများ မဟုတ်ပါလေ မီမီသိမ့် အမျိုးသား မျိုးမင်းနှင့် ဝင်းနိုင် မိန်းမ မိုးသန္တာတို့ပင်ဖြစ်လေသည် ။ “လွမ်းလိုက်တာ မောင်ရယ် “ “မောင်လည်း အတူတူ ပါပဲ မိုးရယ် “ ခန္ဓာကိုယ် နှစ်ခု ခွာလိုက်ကာ တစ်ယောက်ခါးတစ်ယောက်ဖက်ထားရင်း ရီဝေတဲ့ မျက်ဝန်းတွေ နဲ့ ကြည့်မိကြသည် ။ ကျောင်းဝတ်စုံ ခါးတို အကျီအဖြူရောင်လေးနဲ့ ထမီ အစိမ်းရောင်လေးအား ခပ်ကြပ်ကြပ်စည်းနှောင်ထားပီး ဆံထုံးလေး ထုံးထားသော မိုး ကို မျိုးမင်းကြည့်မ၀ ဖြစ်နေလေသည် ။ မိုးသန္တာ မေးစေ့လေးအား လှမ်းဆွဲလိုက်ကာ နုတ်ခမ်းချင်း ဂဟေဆက်လိုက်သည် ။
ကျောင်းစိမ်း ထမီပေါ်မှ တင်ပါးလေးတွေ ကို ပွတ်သပ်ပေးလိုက်ရင်း အနမ်းမိုးတွေ ဆက်တိုက် ရွာနေမိသည် ။ တင်ပါးအောက်ခြေနားတွင် အတွင်းခံမျော့ကြိုးရာလေးက အထင်းသား ဖြစ်နေသည် ။ နုတ်ခမ်းချင်း ပြန်ခွာလိုက်ပီး မျိုးမင်း ရဲ့ ရင်ခွင်ထဲမှာ မှီလိုက်သည် ။ မျိုးမင်း က မိုးသန္တာရဲ့ တင်ပါးလေးတွေ ဆက်ပွတ်ပေးနေလိုက်သည် ။ လွန်ခဲ့သည့် သုံးနှစ်ကျော်လောက်က ရခဲ့ဖူးသော ကိုယ်သင်းရနံ့လေးတွေ ကို ပြန်လည် ရှူရှိုက်မိကြသည် ။ တင်းရင်းလွန်းတဲ့ ရင်သားတွေက မျိုးမင်း ရင်ဘတ် နှင့် ဖိကပ်ထားမိလေသည် ။
ဖင်နှစ်ခြမ်းကြားထဲကို လက်နဲ့ ဆွဲပွတ်လိုက်တယ် ဆိုရင်ပဲ မိုးသန္တာရဲ့ အသက်ရှူသံတွေ မြန်ဆန်လာရသည် “အား….ရှီးးးး မောင် “ “မိုးးးး “ “ရှင်….“ “အရင်တုန်းက လို ရင်ခုန်သံတွေ မြန်နေပီကွာ“ “အတူတူပါပဲ မောင်ရယ် “ “မိုးက အရင်တုန်းကလို စကပ်တိုမလေး မဟုတ်တော့ပဲ ကျောင်းဆရာမ ဝတ်စုံလေးနဲ့ ဆိုတော့ ပိုပီး ရင်ခုန်နေမိတယ် “ “စကပ်တိုမလေး တုန်းကလိုပဲ အချစ်တွေ များများ ပေးပါမောင် “ “ဆရာမလေး ကို စကပ်တိုမလေး ထက် အချစ်တွေ ပိုပေးချင်တာပါ “ “အင်းးးး အား….မောင် ရယ်“ “မောင့်လီးကို ကိုင်ကြည့်ပါဦး မိုး “ “အင်းးးး အကြီးကြီးပဲနော် အောက်ခံဘောင်းဘီကြီး ပေါက်ထွက်သွားဦးမယ် “ မျိုးမင်း ပုဆိုးကို ဆွဲချွတ်ပေးလိုက်ပီး အောက်ခံ ဘောင်းဘီ ပေါ်မှာ ပွတ်သပ်ပေးလိုက်သည် ။
“အရင်လို နမ်းမပေးချင်ဘူးလား “ “အင်းးးး မောင့် စိတ်တိုင်းကျ ဖြစ်စေရမယ်နော် “ မိုးသန္တာ ဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်သည် ။ မျိုးမင်း လီးနဲ့ သူ့မျက်နှာက တစ်တန်းတည်း အနေ အထား ဖြစ်သွားသည် ။ ဘောင်းဘီမျော့ကြိုးလေး ကို အသာအယာ ကိုင်ပီး ဆွဲချွတ်လိုက်တော့ အောက်က လီးက ငေါက်ကနဲ ထွက်လာသည် ။ မျိုးမင်းလည်း အပေါ် အကျီကို ဆွဲချွတ်ပစ်လိုက်သည် ။ မျိုးမင်း အဝတ်အစားမဲ့ ကိုယ်လုံးတီး ဖြစ်သွားသည် ။ သူ့ရှေ့မှာတော့ ကျောင်းဆရာမ ဝတ်စုံလေးနဲ့ မိုးက ဒူးထောက်ကာ မျိုးမင်းလီး ကို အသာကိုင်ပွတ်ပေးနေသည် ။
“မောင့်လီးက အရင်ထက် ပိုကြီးလာသလိုပဲနော် “ “အင်းးး စုပ်ပေးတော့ “ “အင်း “ လီးတံထိပ်ဖျားလေး ကို လျာနဲက အသာ တို့ထိလိုက်ကာ နုတ်ခမ်းလေး ဟပီး ငုံပစ်လိုက်သည် “အားးး` “ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် “ လီးစုပ်နေရင်း မိုးသန္တာ အရင်တုန်းက အချိန် တွေကို ပါ သတိရလိုက်မိသည် ။ တက္ကသိုလ် တက်တဲ့ အချိန်မှာ မောင်နဲ့ ရည်းစားတွေ ဖြစ်ပီး ချစ်ရည်လူးခဲ့ကြတာ အကြိမ်ကြိမ် ။ ထို့နောက် မောင်က နိုင်ငံခြားထွက်သွားသည် ။ သူလည်း ဝင်းနိုင်နဲ့ မိဘတွေ ပေးစားလို့ သဘောတူလက်ထပ်ဖြစ်ခဲ့ပီး ကျောင်းဆရာမ တစ်ယောက်အဖြစ် ဘ၀ ကို ရပ်တည်လာခဲ့ကာ မျိုးမင်းနဲ့ အဆက်အသွယ် ပြတ်ခဲ့လေသည် ။ အခု ပီးခဲ့တဲ့ သုံးပတ်ကျော်လောက်က မျိုးမင်းနဲ့ အမှတ်မထင် ပြန်ဆုံကြတော့ နှစ်ယောက်လုံး အိမ်ထောင်ကျနေသည့် အဖြစ် ဖြစ်နေသည် ။
သို့ပေမယ့်လည်း ငယ်စဉ်က အချစ်တွေ က တဖန်ပြန်မွေးဖွားလာသည်မို့ ဒီနေ့ အချိန် က သူတို့ နှစ်ဦးအတွက် ပထမဆုံး ပြန်လည်အချစ်နယ်ကျွံကြခြင်းဖြစ်လေသည် ။ မျိုးမင်းက တောင်းဆိုလာခဲ့သည်မို့ တော်တော်ကြာစဉ်းစားခဲ့မိသေးသည် ။ သို့သော်လည်း အရင်က အချစ်တွေက လွန်ဆန်မရတဲ့ အဖြစ်မျိုး ခံစားမှုတွေ ပြန်လိုချင်ခဲ့မိသဖြင့် လိုက်လျောရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်သည် ။ ကျောင်းကို ခွင့်တိုင် ၊ ဝင်းနိုင်ကိုတော့ ကျောင်းသွားမည်ဟု လိမ်ညာခဲ့ကာ စောစော ထွက်လာဖြစ်ခဲ့လေသည် ။ “ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် “ “အွတ် အွတ် ပြွတ် ပြွတ် “ “အားးး ကောင်းလိုက်တာ မိုးရယ် အရင်တုန်းကအတိုင်းပဲ မိုးက စုပ်တာ တော်လိုက်တာ “ နုတ်ခမ်း နှစ်ဘက်ကို ဖိကပ်ထားရင်း အတွင်းလျာကို ရစ်ပတ်ကစား က အားရပါးရ စုပ်နေမိသည် ။
“ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် “ “အား…. မိုး..ကောင်းလိုက်တာ အား….း “ လက်တစ်ဘက်ကလည်း ဥတွေကို ခပ်ဖွဖွလေး ပွတ်ပေးနေသေးသည် ။ “အားး..အား….“ “ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် “ လီးကို ပါးစပ်ထဲမှ ပြန်ထုတ်လိုက်ကာ “ကောင်းလားမောင် “ “အင်းးး အရင်တုန်းကထက် ပိုကောင်းလာတယ် ယောင်္ကျားရပီး ပိုကျွမ်းလာတယ်ထင်တယ် “ “ဟွန်းးးးမောင်နော် “ လီးကို ပြန်ငုံကာ စုပ်လိုက်သည် “ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် “ “အား….း မိုးရယ် ကောင်းလိုက်တာ “ ကျောင်းဆရာမ ဝတ်စုံလေးဖြင့် လီးစုပ်ပေးနေသော မိုးသန္တာကို ငုံကြည့်ရင်း စိတ်တွေ ပိုထလာရပြန်သည်
“အား…. ကောင်းလိုက်တာ “ “ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် “ “အားးး..အား….မိုးးးးးး“ “ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် “ “အားးး မိုး မောင် လိုးချင်ပီကွာ စုပ်တာ ရပ်လိုက်ဦး “ လီးတံ ကို ချွတ်လိုက်ပီး မတ်တပ်ရပ်လိုက်ကာ အပေါ်မှ ရင်ဖုံးအကျီအဖြူကြယ်သီးလေး ကို ဖြုတ်မည်အလုပ် “မချွတ်နဲ့မိုး မိုးကို ကျောင်းစိမ်းလေး နဲ့ လိုးချင်သေးတယ် ပီးမှ မိုးအဖုတ်ကို အားရအောင် ပြန်ယက်ပေးမယ် အခု လိုးချင်နေပီ ကုတင်မှာ လက်ထောက်ပီး ကုန်းလိုက် “ “အင်းးးး ပါ မောင့်သဘောနော် “ ကုတင်စောင်းမှာ လက်လေးထောက်ပီး ကုန်းလိုက်တယ် ။ ကျောင်းစိမ်း ထမီ အောက်မှ ဖင်အိုးကြီးတွေ က ကားပီး အယ်ထွက်နေသည် ။
မျိုးမင်းလည်း မိုးသန္တာနောက်မှာ မတ်တပ်ရပ်နေရာယူလိုက်ပီး တင်ပါးတွေကို ပွတ်သပ်လိုက်သည် ထို့နောက် ထမီလေးကို အသာလှန်တင်လိုက်သည် ။ အောက်ခံပင်တီ အသားရောင်လေးမှာ တင်ပါးတွေကို တင်းကြပ်နေအောင် ထိန်းထားသည်။ “အား…. မိုးတင်ပါးကြီးတွေက အရင်ထက် ပို ထွားလာတယ်ကွာ “ “အ … မောင် အား….း“ မောင်က သူမ တင်ပါးကို အားမလို အားမရ အမြဲရိုက်တတ်သည်ကို ပြန်သတိရမိကာ အဖုတ်ထဲမှ အရည်ကြည်များ စိမ့်ကနဲ စိမ့်ကနဲ ကျလာသည် “ “အား….ရှီးးးးမောင် လိုးတော့ကွာ ခံချင်ပီ“ မိုးသန္တာ အတွင်းခံပင်တီလေးကို ဒူးနားလောက်ထိ ဆွဲချလိုက်သည် ။လီးကို အဖုတ်ဝ မှာ အသာတေ့လိုက်ပီး ဖြေးဖြေးချင်းထိုသွင်းပေးလိုက်သည်
“အား…. ဝင်လာပီမောင် အား….အမလေး“ “အား….ရှီးးးး အင့် အင့် အင့် “ “ဖတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ် “ “အားးး မောင် အား…. ကောင်းလိုက်တာ အမလေးးးးလေးးးးး “ “ဘွတ် ဘွတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ် “ လည်ပင်းအထက်နားရှိ ဆံထုံးလေး ကို လှမ်းဆွဲလိုက်ကာ လက်တစ်ဘက်က ခါးစပ်နားလေး ကို ကိုင်ထားရင် ဆောင့်ပေးလိုက်သည် “အင့် အင့် ဖတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ် “ “အားးး ကောင်းတယ်မောင် လိုးးးး လိုးးးး အားးးရှီးးးးဟင့် ဟင်းးးး“ “အင့် အင့် အင့် ဒုတ် ဒုတ်ဒုတ် အင့် “ “အားးး မောင့် အလိုးမခံရတာ ကြာပီကွာ အား…. “ ကျောင်းစိမ်းဝတ်စုံလေးဖြင့် ဖင်ကုန်းခံပေးနေသော မိုးသန္တာကို လိုးနေရသည်မှာ စိတ်ထဲ ပိုပီး ဖီလင် လာလှပေသည် “အင့် အင့် အင့် “ “ဖတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ် “ “ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် “
“အားးး မိုးဖင်ကြီးက ပိုကြီးလာလို့ အရင်ထက် ပို အားရတယ်ကွာ အင့်အင့်အင့်“ “အားးး မောင် အားးး ကောင်းတယ် လိုး အားးး ဆောင့်ပေး အား….“ “ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် “ “အင့် အင့် အင့် “ “အ အ အားးး “ “အင့် အင့် အင့် ခံလို့ကောင်းလား မိုးးးး “ “အင်း ကောင်းတယ်မောင် အားးး အ ဆောင့် ပေး မိုး ခံနိုင်တယ် ဆောင့်ဆောင့် “ “အင့်ကွာ အင့်ကွာ ရော့ အင့်အင့် ဖတ်ဖတ် ဖုတ် ဖတ် ဘွတ် “ “ဇွပ် ဇွပ် ဇွပ် ဇွပ် ဘွတ် ဘွတ် “ ကုတင်စောင်း ဖင်ကုန်းထားသည့် အနေအထားမို့ လိုးရသည်မှာ အားရှိလှသည် ။
ငယ်ချစ်တွေ အခုမှ တဖန်ပြန်တွေ့ ပြန်လိုးရသည်မို့ စိတ်တွေ တအားထန်နေလေသည် “အင့်ကွာ အင့် အင့် အင့် မိုးဖင်ကို ကြိုက်တယ်ကွာ အင့် အင့် အင့် “ “ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် “ လီးတံမှာ အဖုတ်ထဲသို့ အဆုံးထိ ဝင်သွားလိုက် ပြန်ထွက်လာလိုက် စည်းချက် ကျနေပေသည် “မိုး … ထလိုက် နံရံမှာ လက်ထောက် ဖင်ကော့ပေးးး“ “အင်းးးးး“ မိုးသန္တာ မတ်တပ်ရပ်လိုက်ပီး ထမီကို ပါ ချွတ်ချလိုက်ကာ အောက်ခံပင်တီလေးကိုလည်း အောက်ထိ ချွတ်ချလိုက်သည် “မောင် အကုန်ချွတ်လိုက်တော့မယ်နော် အကျီတွေ ကြေကုန်လိမ့်မယ် “
“အင်းးး မိုသဘော “ အကျီရော ဘော်လီပါ ချွတ်ပစ်လိုက်သည် “ဟားး.. မိုး နို့တွေကလည်း အယ်နေတာပဲကွာ “ ဖင်နှစ်ခြမ်းကြား လီးကို အမြှောင်းလိုက် ကပ်ပေးလိုက်ရင်း နောက်ကနေ သိုင်းဖက်ကာ နို့အုံကြီးတွေကို အားရပါးရ နယ်ပစ်လိုက်သည် ။။ “အားးး ရှီးးးမောင် အား….“ နှစ်ယောက်သား မတ်တပ်ရပ် အနေအထား ဖြင့် မိုးသန္တာကလည်း ဖင်ကြီးကို နောက်ကို ပစ်ကာ ကော့ကော့ပေးနေမိသည် ။ ထို့နောက် အခန်းနံရံ ဆီသွားကာ နံရံမှာ လက်ထောက်လိုက်ရင်း ဖင်ကော့ပေးလိုက်သည်။ “မိုး ပေါင် နဲနဲ ကားလိုက် “ အင်းးး.. မျိုးမင်းက မိုးသန္တာ နောက်မှ ထိုင်ချလိုက်ကာ ဖင်နှစ်ခြမ်းကို ဖြဲကြည့်လိုက်သည် ။
“အားးး မိုး စောက်ဖုတ်ကြီးက အရမ်းလှတာပဲကွာ ပြွတ် ပြွတ်ပြွတ် “ ပြောလဲပြော လျာဖြင့် လှမ်းထိုးယက်ပစ်လိုက်သည် “အား….ကောင်းလိုက်တာမောင်ရယ် မောင်ယက်ပေးတာ မခံရတာ ဘယ်လောက်တောင်ကြာသွားပီလဲ အားးး“ “ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် “ ဖင်နှစ်ခြမ်းကြား အနောက်မှ ဖြဲပီး ယက်နေသည်မို့ မျိုးမင်း နှာခေါင်းက မိုးသန္တာ ဖင်ကြားထဲ နစ်မြုပ်နေသည် “ပြွတ် ပြွတ် ပလက် ပလက် ပြွတ် “ “အားးး “ မျိုးမင်း လျာကို အဖုတ်မှ ဖင်ဝထိ အလျားလိုက် ဆွဲသပ်ပေးလိုက်သည် “ပလက် ပလက် ပြတ် ပြတ် ပြတ် “
“အား…. မောင်ရယ် အား….“ မိုးသန္တာက အသား သိပ်မဖြူသည်မိုး အဖုတ်က လည်း နဲနဲ တော့ အညိုဘက်သန်းသည် ။ ဖင်ဝ ကလည်း ညိုတိုတို လေး ။ စအို ခရေသားတလျောက်ကို လျာနဲ့ ရစ်သိုင်း ပတ်ကာ ယက်ပေးလိုက်တော့ ဖင်ကြီး ကော့ကော့တတ်သွားသည် “အား…. မောင် …..အမလေးးးး အား….“ “ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် “ “အားးး ရှီးးးးးးကောင်းတယ် မောင် အား…. “ ““ “အ မောင် အား….းး“ သူ့ယောင်္ကျားက အခုလို ဖင်ကို မရိုက်ပေးခဲ့ဖူးဘူး ။ မျိုးမင်း တစ်ယောက်သာ လိုးရင် ဖင်ရိုက်တတ်လေသည် ။
မိုးသန္တာဖင်ကြီးမှာ မျိုးမင်း လက်ဝါး ရိုက်ချက်ကြောင့် တုန်ခါသွားသည် ။ “ဖြောင်းးးးးးဖြန်းးးးးးးးးဖတ် ဖတ် “ “အား…. အ အီးးး.. အား….“ မျိုးမင်း လက်ခလယ်ကို ပါးစပ်ထဲ ထိုးထည့်ကာ တံတွေး စွပ်လိုက်ပီး မိုးသန္တာ ဖင်ပေါက်ထဲ အဆုံးထိ ထိုးထည့်ပစ်လိုက်သည် “အား… “ “အမလေးးးး အား…. မောင်ရေ အား….“ လက်ခလယ်ကို ဖင်ခေါင်းထဲမှာ ကွေးလိုက်ဆန့်လိုက် လုပ်ရင်း မွှေထိုးပေးကာ အထုတ်အသွင်း လုပ်ပေးလိုက်သည် “အားးး….“ မိုးသန္တာ ဒူးတွေ ပါ တဆက်ဆက် တုန်လာလေသည် “အီးးးအား….းးးး“ ဖင်နှစ်ခြမ်းကြားကို တံတွေး ပစ်ခနဲ ထွေးလိုက်တော့ တံတွေးတွေက ဖင်နှစ်ခြမ်းကြားမှ ဖင်ပေါက်ဝထိ စီးကျလာက ပိုမိုစိုစွတ်လာပီး လက်ခလယ် အသွင်းအထုတ်မြန်ဆန်လာသည်။
“အ အ အ အား….းး“ “အင့် အင့် အင့် အင့် အင့် အင့် “ “အားးး မောင် လိုးတော့ အားးးရှီးးးး “ “အင်းးး မိုး ဒီတခါ ဖင် ချ မယ်နော် မိုးဖင်ကို မချရတာ ကြာလှပီ “ “အင်းးးး မောင့်သဘော မိုး တကိုယ်လုံး မောင့်သဘောပဲ ကြိုက်တာလုပ် အား….“ မိုးသန္တာ နောက်တည့်တည့် တွင်နေရာယူလိုက်ပီး ဒူးကို အသာကွေးလိုက်ကာ ဖင်ပေါက်ဝ တွင် လီးဒစ်ကို တေ့လိုက်သည် ။ ဒစ်ခေါင်း ကို မြုပ်ရုံ လက်ဖြင့် ထိန်းကာ အသာ ထိုးထည့်လိုက်သည် ။
စိုစွတ်နေသည်မို့ ဒစ်ချောင်းက ပလွတ်ခနဲ့ တိုးဝင်သွားသည် “အ …. “ “ဖြေးဖြေးချင်း အကုန်ထည့်မယ်နော် “ “အင်းးးး အား…. ဖြေးဖြေး မောင် “ “အင်းးး….အင့် “ စီးတွဲတွဲ တစ်ရစ်ချင်း ထိုးဝင်သွားတဲ့ အရသာ ကို နှစ်ယောက်လုံး ခံစားနေမိသည် “အားးး ရရဲ့လား မိုး တအားကြပ်တယ်နော် “ “အင်း ရတယ်မောင် ထိုးထည့် အား….း“ “အင်းးး တော်တော် ဝင်နေပီ အဆုံးထိ ရောက်တော့မယ် “ “အငြးးးးအ အ အ “ လက်နှစ်ဖက်နဲ့ တင်ပါး နှစ်ခြမ်း ကို အစွမ်းကုန်ဖြဲကြည့်ကာ ထိုးသွင်းလိုက်သည် “အား….အဆုံးထိ ရောက်သွားပီ “ “အားးး မောင်ရယ် နာလည်းနာတယ် ကြပ်တယ် “
“အင်းးး အထုတ်အသွင်းလုပ်မယ်နော် “ “အင်းး ဖြေးဖြေး မောင် အားးး မောင်လိုးပီးကတည်းက အခုထိ ဖင်မခံဖြစ်ဘူး “ “အင်းးး ဟုတ်လား ယောင်္ကျားက ဖင် မချ ဘူးလားးး“ “ဟင်အင်းးး မချဘူး “ “အင်းးး မိုးကို မောင်နဲ့ မိုးယောင်္ကျား အပြင် အခြားသူ နဲ့ လိုးကြသေးလား “ “အာ မောင်ကလည်း မိုးက မောင်နဲ့ပဲနေဖြစ်ခဲ့တာလေ အခြားလူ နဲ့ မနေပါဘူး ယောင်္ကျားရပီးး ယောင်္ကျားနဲ့ပဲခံတာပေါ့လို့ ဟွန်းးးး“ အဝင်အထွက် နဲနဲ ကြပ်နေသေးသည်မို့ ဖြေးဖြေးချင်း အထုတ်အသွင်းလုပ်ပေးရင်း နို့တွေကို ညှစ်ပေးနေမိသည် ။
“အင်းးးး အာ့ကြောင့် မိုး ဖင်က ကြပ်နေတာကိုးးး အား….“ “အင်းးးး အားးး ဖြေးဖြေးမောင် ကွဲ သွားမှာ စိုးတယ် အားးးရှီးးးးး“အား….“ “အားးး မောင် ပြန်ထုတ်ပီး အဖုတ်ထဲ ပြန်သွင်းပီး ချောအောင်လုပ်လိုက်ဦး ကြပ်နေတယ် အား….“ မျိုးမင်းလည်း လီးတံကို ဖင်ပေါက်ထဲက ပြန်ချွတ်ကာ စောက်ဖုတ်ထဲ လေးငါးချက်ဆောင့်ပေးလိုက်တယ် လီးတံမှာ စောက်ရည်များ နဲ့ ချွဲကျိကျိ ဖြစ်လာတော့မှာ ဖင်ဝမှာ တေ့ပီး ပြန်ထိုးထည့်လိုက်တော့ စောစောက ထက်စာလျှင် ပို ချောမွတ်လာတယ် “အား…. မောင် ကောင်းလာပီ အင်းးးးးအား….“ “အား…. မိုး ဖင်ကို လိုးလို့ ကောင်းလိုက်တာ အား….းး ဖြေးဖြေး ဆောင့်တော့မယ်နော် “ “အင်းးး မောင် အား….းး လိုးးးအမလေး“ ဖင် ခေါင်းထဲမှာ လီးတံ က တော်တော်လေး ချောချောမွေ့မွေ့ ဖြစ်လာသည်
“အင့် အင့် အင့် အင့် “ “ဖတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ် “ “အား….း အား….း“ “ဘု ဘုဘု …ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ် “ “အား…. အမလေး မောင် အားးး ကောင်းလာပီ ဆောင့် အား….း“ “အင့် အင့် အင့် ရော့ အားးး ကောင်းလားမိုး ကြိုက်ရဲ့လားးး“ “အင်းးး အရမ်းကြိုက်တယ်ကွာ အား…. “ မိုးသန္တာ ရဲ့ ပုခုံးနှစ်ဘက်ကို ဆွဲကိုင်ပီး နောက်ကနေ ဆောင့်ဆောင့် လိုးနေသည် “အား….းးကောင်းလိုက်တဲ့ ဖင်ကွာ အား….း“ “အား…. မောင် … မိုး ဒူးတွေ မခိုင်ချင်တော့ဘူးအား….း ကုတင်ပေါ်သွားရအောင်ကွာ မရပ်နိုင်တော့ဘူး“ ဟုတ်ပါသည် မိုးသန္တာ ဒူးတွေ တဆက်ဆက် တုန်လာပီး ရပ်နိုင်စွမ်း သိပ်မရှိတော့ ဒူးတွေ ညွှတ်ချင်လာသည်
ကုတင်ပေါ်သို့ ဆွဲခေါ်လာပီး မျိုးမင်း ပက်လက်လှန်လိုက်တော့ မျိုးမင်းဘေးမှာ ဒူးလေး တုတ်ကာ ထိုင်လိုက်ပီး လီးတံကြီးကို ကိုင်ကာ ဂွင်းထုပေးလိုက်သည် “မောင့်လီးကြီး က အရင်ထက် တော်တော် ကြီးလာတယ်နော် တုတ်လည်း တုတ်လာတယ် “ “မိုးရဲ့ အလှတွေကို မြင်လိုက်ရတော့ လီးက ပိုတောင်လာပီး ပိုထွားလာတာလေ “ သူမ ဖင်ပေါက်ထဲမှ ထွက်လာပီး အရည်တွေ စိုရွှဲနေသော လီးတံ ကြီးကိုကြည့်ကာ စိတ်တွေ ပိုထလာရင်း လီးတံကြီးကို ငုံစုပ်လိုက်သည် “ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် “ “အားးး ကောင်းလိုက်တာ မိုးးးးးရယ် “ “ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် “ “အားးး“ “မိုးးး တက်ဆောင့်ပေးကွာ “ “အင်းးးး“ ပါးစပ်ထဲမှ လီးကို ချွတ်လိုက်ကာ မျိုးမင်းပေါ် ကျောပေးပီး ခွလိုက်သည် ။
မိုးသန္တာ သူ့လက်ကို သူ တံတွေး စွတ်လိုက်ပီး ဖင်ဝမှာ သုတ်လိမ်းကာ လီး တံကို ကိုင်ပီး တေ့ကာ ထိုင်ချလိုက်သည် “ဘွတ် …..“ “အား…အား….း“ “အင့်အင့်အင့်အင့် “ “ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ် “ ကျောပေးကာ ထိုင်ဆောင့်ပေးနေသည်မို့ မိုးသန္တာရဲ့ ဖင်အိုးကြီးရော လီး အဝင်အထွက်ကော သေချာစွာ မြင်နေရလေသည် ။ “အား….အီးးးး အား….“ “ဖွတ် ဖွတ် ဖွတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ် “ “အင့် အင့် အင့် “ “ဖြန်း ဖြန်း“ “အား….းးးး ဆောင့်ကွာ အား….း“ “အင့် အင့် အင့် အင့် “ “အားးး တောင့်လိုက်တဲ့အိုးကွာ …. မိုး နဲ့သာ လက်ထပ်ဖြစ်ရင် မိုးကို ဖင်ရော အဖုတ်ရော နေ့တိုင်းလိုနေမိမှာပဲ အားးး“ “အင်းးးးး အင့် အင့် အား…. ကောင်းတယ်မောင်ရယ် အား….“ “အင်းးးး ဆောင့်ကွာ အား….“ “စောက်ဖုတ်ထဲ ပြောင်းဦးမယ်မောင် အားးး မိုး ပီးချင်လာတယ် အား….း“ လီးတံကို လက်နဲ့ လှမ်းဆွဲထုတ်လိုက်ရင်း အဖုတ်ထဲ သို့ ပြောင်းထည့်လိုက်ကာ စကောဝိုက်ပုံစံ ဖြင့် လှည့်ကာ ညှောင့်နေမိသည် ။
အင့် အင့်အင့်… “ဖတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ် “ `အား…“ “အား….မောင်ရေ အား….း အမလေးးးးး“ “အားးး ဆောင့် မိုးးး မောင်လည်းပီးတော့မယ် အား….းး“ “အင့် ကွာ အင့် အင့်အင့် “ မျိုးမင်း ကိုယ်ကို မတ်လိုက်ကာ မိုးသန္တာကို တွန်းလိုက်ပီး လေးဘက်ကုန်း အနေ အထား ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်သည် ။ လီးတံကတော့ ကျွတ်မသွား “အင့် အင့် အင့် အင့် “ နောက်ကနေ ခါးကို ကိုင်ပီး အားကုန်ဆောင့်လိုးတော့သည် “အင့်အင့် ဖတ် ဖတ် ဖွတ် ဖွတ် “ “အား….းမောင် အားးး ထိတယ် အားးး အမလေး“ “အင့် အင့် အင့် ရော့ကွာ အင့် “ “ဖွတ် ဖွတ် ဖွတ် ဖွတ် ဖွတ် “ “ဇွပ် ဇွပ် ဇွပ် ဇွပ် ဇွပ် “ “အား…. ထွက်တော့မယ် မိုး..အား…. အင့်အင့် အီးးးးး“ ဆောင့်ချက်တွေက ပိုပို မြန်လာပီးနောက် မျိုးမင်း ဆက်မထိန်းနိုင်တော့ပဲ မိုးသန္တာ ဆောက်ဖုတ်ထဲသို လရေတွေ တဖျောဖျော ပန်းထုတ်ပစ်လိုက်တော့သည် “အ အ အ အ အ အား…ထွက်ကုန်ပီ မိုးးးအား….“ “အားးး မိုးလည်း ပီးပီ အား…. ကောင်းတယ် အား….“ နှစ်ယောက်သား ဘေးသို့ ခွေခွေလေး လဲကျသွားတော့သည် ။
အဖုတ်ထဲမှ လီးတံကလည်း ကျွတ်ထွက်သွားကာ အဖုတ်ထဲမှ လရေတွေ စီးကျလာလေသည်..ဘယ်လောက်ကြာကြာ အိပ်ပျော်သွားသည်မသိ မိုးသန္တာ ရေချိုးခန်းမှ ပြန်ထွက်လာတော့မှ မျိုးမင်းလည်း နိုးလာသည် ။ “မိုးးး ရေချိုးလိုက်တာလား “ “ဟုတ်တယ် ညစ်ပတ်နေလို့ “ တဘက်အဖြူရောင်ကြီး ပတ်ထား သည့် မိုးမှာ တမျိုးလှနေသည် ။ ရေစွတ်ထားသည့် တဘက် အသေးတစ်ထည် ဖြင့် မျိုးမင်း လီးတံကို ယုယုယယ သုတ်ပေးနေသည် ။ ဟိုး အရင်တုန်းကတည်းက လိင်ဆက်ဆံပီးတိုင်း မိုးသန္တာက မျိုးမင်း လီး ကို သေချာ သန့်ရှင်းပေးနေကျမို့ မျိုးမင်း အရင်ကအချိန်လေးတွေ ကို တွေးမိရင်း ပြုံးမိလိုက်သည် “မိုးက အရင်တုန်းကလိုပဲနော် မောင့်ကို သန့်ရှင်းပေးတတ်တာလေး သဘောကျတယ် “ ပါးလေးကို သာသာဖွဖွ နမ်းလိုက်သည်။ပြီး
Categorized as အငျးဆကျ Tagged ငယျခဈြဦးမို့ မမနေို့ငျ